Su'aal: Wajiga ayaa wax iiga soo yaaca oo canbaar u eg?
Author Topic: Su'aal: Wajiga ayaa wax iiga soo yaaca oo canbaar u eg? (Read 2276 times)
« on: March 23, 2015, 09:34:54 AM »
Asc doctorada sharafta leh
Salan kadib maqaarka khasatn wajiga aya wax iga sooyaac wax canbaar u eg oo cun cun leh oo cad daawo aya doctor iqoray wan iag bi iwaydy bil walba wan isku arka dawada ayn marsha mar walba wayn so noqota ?
Re: Su'aal: Wajiga ayaa wax iiga soo yaaca oo canbaar u eg?
« Reply #1 on: March 30, 2015, 01:59:21 PM »
Fadlan la xiriir takhtar cudurrada maqaarka ku taqasusay maadaama cilladaadu ay bixi la'dahay, wajigane ay tahay meesha aad ka cabanayso waxaa habboon in aad takhtar aqoon u leh xanuuandaa la xiriirtid, anagu wax badan kama sheegi karno maadaama xanuunada maqaarka ku dhaco u baahan yihiin in la arko.
Views: 27486 January 20, 2018, 03:01:49 PM
Views: 42979 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 28139 April 16, 2013, 01:40:49 PM
Views: 27813 March 04, 2011, 09:41:53 PM
Views: 23582 April 21, 2011, 08:48:49 AM